Ihe na November 28, 2021 By pịa
Mgbe ọnwa zuru oke mere, enwere ike iji Pickaxe were were were were were were were were were were were rụzie Ọkpụkpụ ọ bụla arụziri iji dobe Sketch, Marble, wee gbasaa Bishop Clockwork kwekọrọ, Clockwork Knight, ma ọ bụ Clockwork Rook.
Ọ na-achọ igwe Sayensị ka ọ mepụta ma enwere ike ịhụ ya na Taabụ Nautical. Enwere ike nweta ngwa ihe ndozi ụgbọ mmiri n'isi egwuregwu site na ibibi nnukwu
Kedu otu esi edozi ihe dị na agụụ anaghị agụ gị? A na-eji ngwa akwa akwa site na ịhọrọ ya na ngwa ahịa, wee pịa aka nri na ihe a ga-arụzi. Ihe nwere ike ịbụ
A na-emepụta ọtụtụ oghere anwụ ka ọ dịruo afọ 25 ruo 30, nke bụkwa nkezi ndụ nke ọtụtụ sistemu mkpuchi mkpuchi nke asphalt. N'ihi nke a, ị chọrọ nke gị
Kedu ihe dị ka akwụkwọ ọbá akwụkwọ mebiri emebi? A na-ewere akwụkwọ dị ka “emebi emebi” ma ọ bụrụ na eweghachi ya n'ọbá akwụkwọ n'ọnọdụ chọrọ nrụzi nnukwute ma ọ bụ enweghị ike.
Ị nwere ike idozi mgbawa na Granite Countertops? Hichaa Mpaghara. Jupụta mgbawa ahụ na gel Epoxy nke agba jikọtara ọnụ. Ka Epoxy kpọọ nkụ dịka ntuziaka onye nrụpụta siri dị. Wepu ya
Akwụkwọ na-ere ere ọ dị mma maka ala? Mgbe agbakwunyere n'ubi gị, akwụkwọ na-eri nri earthworms na ụmụ nje bara uru. Ha na-eme ka ala dị arọ dị arọ ma na-enyere ala aja aka idowe mmiri mmiri. Ha na-eme otu
Kedu ihe na-eme mgbe ị jikọtara ma rụkwaa ohere? Faịlụ nchekwa data nwere ike ito ngwa ngwa ka ị na-eji ha, mgbe ụfọdụ na-egbochi ịrụ ọrụ. Ị nwere ike iji iwu nchekwa data kọmpat na mmezi ka
Enwere ncheta na friji Kenmore Elite? Ngwaahịa: Refrigerator - Maytag Corp. nke Newton, Iowa, na-echeta ihe dị ka 6,000 Kenmore Elite-brand TRIO ụdị friji maka nnwale na nnọchi. Nke
1 2 ... 81,053 Osote